Wasaaradda Boostada oo shaacisay dhibaato ka heysata ku biirista Xubinnimada UPU | allsaaxo online
Wasaaradda Boostada oo shaacisay dhibaato ka heysata ku biirista Xubinnimada UPU
Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Boostada Mudane C/laahi Bile Nuur ayaa ugu horreyn warbixin kooban ka bixiyay waxyaabihii ka qabsoomay qorshaha lagu kicinayo Boostada Soomaaliya oo haatan maraya heer gabogabo ah. Wasiiru-dawlaha ayaa xusay in, inkastoo la billaabay in boostada ay soo gaarto dalka 2013-dii, haddana caqabadda ugu weyn ee Boostada u dhaqaaqi weyday inay ahayd inaysan dalka dibeddiisa wax u diri karin, isla markaan aysan si buuxda uga qeyb gali karin hawlaha UPU maadaama aan la bixin qaaraankii xubinnimada tan iyo 1983-dii.
Ugu dambeyn wasiirka ayaa u mahadceliyay Danjire Bishaar tixgelinta gaarka ah ee uu siinayo Boostada Soomaaliya. “Sharaf weyn ayay noo ahayd inaan la kulano nin walaalkeen ah oo madax ka ah Hay’ad caalami ah oo Qaramada Midoobay hoos tagta. Waxaan rajeyneynaa in wada-shaqeynteena cusub ay miro-dhal noqon doonto.”